Indlu yaseLwandle (AKA Indawo Engcwele) iPropati eSangweni - I-Airbnb
Indlu yaseLwandle (AKA Indawo Engcwele) iPropati eSangweni
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguLucile
I-1000 Sq Ft Beach House enamagumbi amabini okulala abucala (Ibhedi enye yaseKing kunye namawele ama-2) kunye negumbi lokuhlambela ezimbini. Kukho neebhedi ezimbini zokulala kwigumbi lokuhlala zilala 4-6 ngokukhululeka. Inekhitshi eligcweleyo kunye ne-500 sq ft iveranda yokujonga ukutshona kwelanga okumangalisayo kweSandy Bay.
Nceda uqaphele: Ubuncinci bobusuku obu-7 ngexesha loNyaka oPhezulu (ngoDisemba woku-1 ukuya phambili)
I-ROATAN IYA KUVULA NGE-17 AGASTI ngo-2020
Nokuba yiRomantic getaway ye-2 okanye iholide yoSapho ye-6, Indlu yaseLwandle likhaya lakho kude nekhaya. Inamagumbi amabini okulala abucala (Ibhedi enye yaseKing kunye namawele ama-2) kunye neebhafu ezimbini. Kukho neebhedi ezimbini zokulala kwigumbi lokuhlala. Inekhitshi eligcweleyo kunye neveranda engama-500 yesikwere sonyawo ukujonga ukutshona kwelanga okumangalisayo kweSandy Bay.
Indlu ixhotyiswe ngokupheleleyo ngeelinen, intambo, i-WiFi, i-AC, iiselfowuni, inkonzo yaphakathi evekini kunye namanzi okusela.
Ipropathi ibekwe kwiGadi yee-Acre ezithandathu e-Eden enemithi yeziqhamo engaphezulu kwama-40, imithi yesundu kunye neenyawo zayo ezingama-300 zonxweme lwabucala (kwabelwane nabanye abahlali bethu abambalwa apha eSanctuary). Le ndawo ikwagaywe ngonogada kunye nomphathi wendawo yokuhlala. Lo mhlaba ungaphakathi kweMarine Reserve. Ulwalwa luyi-100 ft ukusuka kwidokhi; i dolphin pen malunga ne 50 ft. Umntu osebenza ixesha elizeleyo usenokubakho ukuze kuphekwe, kucoceke yaye kugcinwe abantwana.
Isitshixo sika-Anthony sisithuba seebhloko ezimbini kude, njengoko sisikolo seOctopus Dive. Iindawo zokutyela ezintathu ezilungileyo kukuhambo lwemizuzu emithathu. Iiteksi zi $2-5 umntu ngamnye. Ipropathi yimizuzu nje engama-20 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya kunye neCoxen Hole.
Kwiindwendwe zethu ezihlala ubusuku obu-7 kwaye ixesha elide sikwabonelela ngesithuthi sesikhululo seenqwelomoya.
Ukuba ufuna indawo yokuhlala eyongezelelweyo yepati yakho, sikwanayo nenye indlu enamagumbi amabini okulala malunga neemitha ezili-150 ukusuka elunxwemeni ecaleni komsinga kunye nendlwana encinci yaselunxwemeni ebizwa ngokuba yiCabana ecaleni kolwandle kunye nebhafu enye, ikhitshi elincinci kunye nedesika yangaphambili ejonge. ulwandle.
IBlue Bahia, iiLwandle ezizolileyo, kunye nezitshixo zika-Anthony zonke zikumgama wokuhamba kwaye zivuleleke kwisidlo sakusasa, isidlo sasemini kunye neSidlo sangokuhlwa.
Amagama angundoqo: Izindlu zaseLwandle (ii), iCottage, iStudio, yaBucala, iKitchen epheleleyo, iSandy Bay, iRoatan, iBeach House, iMango, iBamboo, imithi yeziqhamo, iRoatan, iDock, iDolphins, iSnorkeling, ulwalwa
Nceda uqhagamshelane nathi ukonwabela ukurhoxa kwethu okuhle.
Isitshixo sika-Anthony ziibhloko ezimbini kude njengoko sisikolo seOctopus Dive. Ipropathi ikwimizuzu nje elishumi ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya kunye neCoxen Hole.
I-Blue Bahia, iiLwandle ezizolileyo, kunye ne-Anthony's Keys zonke zingaphakathi komgama wokuhamba kwaye zivulekele isidlo sakusasa, isidlo sasemini kunye nesidlo sakusihlwa.
Sinomphathi okwindawo yokuhlala, uMiriam, oya kukulanda kwisikhululo seenqwelomoya akuse ekuthengeni ukutya kwindlela eya eSanctuary. Ukhona ukukunceda ngexesha lokuhlala kwakho. UMiriam unokunceda ngokuseta ukhenketho kwaye uphendule nayiphi na imibuzo onokuba nayo wakuba ufikile eRoatan. UGeorgie (umncedisi kaLucile) kunye noLucy nabo bayafumaneka nge-imeyile okanye ngetekisi.
Sinomphathi okwindawo yokuhlala, uMiriam, oya kukulanda kwisikhululo seenqwelomoya akuse ekuthengeni ukutya kwindlela eya eSanctuary. Ukhona ukukunceda ngexesha lokuhlala kwakho. U…